jsoup: Java HTML Scrapper - Famerenana mitsidika
jsoup dia tahiry Java izay manatanteraka HTML. Izy io dia fitaovana amin'ny API mahomby sy mahomby izay manangona, manadihady ary mitantana ny angon-drakitra, amin'ny fampiasana ny DOM, CSS, ary fomba hafa mahazatra.
Ny mpamorona sy mpamorona tranonkala dia afaka mamorona antontan-drakitra avy amin'ny loharanom-baovaon'ity tranonkala ity nefa tsy manova ny rafitry ny rakitra loharano. Rehefa avy naka ny rakitra, ireo mpampiasa jsoup dia afaka manova na mamerina manova ny singa ao amin'ny rafitra manontolo na ny singa ao amin'ny singa amin'ny fanampiana na fanovana ireo singa na votoaty na ireo.
Ny fitaovana dia naorina miaraka amina fahaiza-manao mahavariana mba hanomezana ny fomba fampiasa andavanandro fandaharam-potoana ho an'ny mpampiasa ao anatin'ny fahasamihafan'ny tranonkala sy ny fampiharana. Izany dia manome ny mpampiasa azy ny fidirana ilaina mba hiovana, hamafa, na hanampiana ireo fitaovana amin'ny endriny.
jsoup dia afaka mamaky sy mamaritra ny angon-drakitra ho vondrona kely kokoa ho an'ny fandikan-teny mora kokoa amin'ny endrika hafa. Ny angon-drakitra miseho dia alaina amin'ny endrika algorithmic fampandrosoana izay mifototra amin'ny fehezan-dalan'ny fananganana na famokarana hazo. Izy io dia naorina mba hahatakarana sy hampidirana ireo singa HTML toy izany mba ahafahany manangona ireo antokon-drakitra noforonina amin'ny famolavolana tahaka izany, arakaraka ny rafitra kodia. Ahoana no anaovany izany? Izy io dia manaparitaka sy manasitrana ny pejy web manontolo ho an'ny fidirana sy ny lamina mba hahazoana data. Raha azo atao ny fanerena ny data, dia handroso amin'ny:
Ny famakiana sy fandinihana ny hazo" parse "avy amin'ny haavony avo indrindra amin'ny rafitra fanorenana ka hatramin'ny ambany indrindra amin'ny fiheverana ny singa tsirairay.
Manangona angon-drakitra avy amin'ny ambaratonga ambany indrindra amin'ny rafitra, mandinika ny singa rehetra momba ny angon-drakitra, amin'ny alalan'ny composite intermediate à la côte de la parse ou d'abduation tree
1. Ny famaritana ireo tarehin-tsoratra sy ireo angon-drakitra voasintona dia ny famolavolana ny karazan-tsakafo,
2. Fandikana izay azo vakina sy amporisihan'ny tenim-paritra izay afaka mametraka ny singa data araka ny filahatry ny preference ary azo ampiasaina
3. Famaritana elektronika izay mamolavola tarehimarika vaovao izay mifanaraka amin'ny torolalana ilaina, ny lanjany sy ny lanjany ho an'ny mpampiasa.
ny jsoup dia mifanaraka amin'ny sy afaka manangana rafitra maoderina HTML, fiteny interface, programa ary fomba fanoratana, anisan'izany ny takian'ny WhatWG HTML5. Izy ireo koa dia afaka mamaha ny rafitra HTML ao amin'ny Tahirin-tsoratra Model Object toy ny rindrankajin'ny rindrambaiko ampiasaina amin'ny famoahana, fanivanana ary famoahana ireo loharanom-baovao sy loharanom-baovao ao amin'ny World Wide Web.
ny jsoup dia afaka manana:
manaparitaka sy manaparitaka HTML amin'ny URL, fichier, na string
hanatsara ny votoatin'ny HTML, ny toetra ary ny lahatsoratra
hanaisotra ny votoaty ampiasain'ny mpampiasa amin'ny lisitra fotsy tsy azo antoka, mba hisakanana ny fanafihana XSS
manome HTML voafaritra tsara
Ny rindrambaiko dia naorina mba hamaha ny karazan-tsipika HTML raha tsy misy ny rafitra: avy amin'ny tsy misy dikany sy ny fanamarinana, ho an'ny tag-soup tsy mety: jsoup dia hamorona ny rafitra fanoratana Source .